Real Madrid, Barcelona iyo Man United oo la ogaaday Kooxda haatan ku horreysa tartanka loogu jiro saxiixa Jadon Sancho – Gool FM
(Manchester) 17 Maajo 2020. Kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa tartan ugu jira sidii ay ula soo saxiixan lahaayeen Jadon Sancho, balse hadda waxaa la ogaaday kooxda hoggaaminaysa tartanka loogu jiro.
Kooxda Man United ayaa lagu soo warramayaa inay safka hore kaga jirto tartanka loogu jiro saxiixa Weeraryahanka Kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Isagoo dhaliyay 14 gool, sidoo kale caawiye ka noqday 16 gool oo kale intii lagu jiray xilli ciyaareedka horyaalka Bundesliga ee 2019-20, Sancho wuxuu u soo ifbaxay mid ka mid ah rajada ugu weyn ee Yurub.
Kooxaha kala ah Barcelona, Real Madrid, Chelsea iyo Liverpool ayaa dhammaantood lagu qiimeeyay inay xiiseynayaan ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, laakiin Man United ayaa lagu soo warramayaa inay hal talaabo ka horreyso kooxaha ay ku xafiiltamaan ugaarsiga Sancho.
Sida laga soo xigtay The Athletic, Guddoomiyaha Man United ee Ed Woodward ayaa caddeeyay in Red Devils ay si aad ah u xiiseyneyaan garablaha u dhashay dalka England.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in Sancho kooxdiisii ee hore ee Manchester City inay markii hore diiday inay u tartamaan dalab kasta oo Sancho ah, laakiin Citizens ayaa laga yaabaa inaysan sameynin isku day ay ku doonayaan inay garabkan ku soo celiyaan garoonka Etihad.
Sancho wuxuu ciyaaray 11 daqiiqo ciyaartii Dortmund ay 4-0 kaga badisay Schalke 04 shalay galab oo Sabti ahayd, iyadoo horyaalka Bundesliga uu dib u soo laabatay kaddib in kabadan labo bilood oo uu ku maqnaa sabab la xiriirta faafaha Coronavirus.
Kooxdee ayuu haatan ku sii jeedaa xiddiga Manchester United ee Paul Pogba?